ကိုရင်နော် မခင်လေးတို့က ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ post လေးကို ပြန်တင်ပေးပါ ဆိုပြန်တယ်။ ကျွန်တော် တကယ်တန်းကြိုက်တာ သရော်စာဗျ။ ကိုယ်တိုင်က ကြိုက်ပေမယ့် မရေးဖြစ်တော့ သရော်စာ ရေးတတ်တဲ့ ကိုရင်ညိမ်း၊ ကိုရင်နော် မခင်လေး၊ ကိုကိုဖရီး၊ ဟန်သစ်ငြိမ်တုိ့ဆီသွားပြီး ငေးနေကျဗျ။ ဒီသင်္ကြန် post လေးကတော့ ကျွန်တော် ရှားရှားပါးပါး ရေးထားတဲ့ သရော်စာ ဝတ္ထုလေးပါဗျာ။ မနှစ်က သင်္ကြန်မှာ သူငယ်ချင်း blogger တွေကို နောက်ပြီး ရေးထားတဲ့ အပျော်ဖတ်လေးပါ။ အချို့ blogger တွေက ဒီ blog လောကကို စွန့်ခွာသွားကြပေမယ့် အမှတ်တရအဖြစ် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘာတခုမှ မတည်းဖြတ်ဖဲ နဂိုမူရင်းအတိုင်း ပြန်တင်ပါတယ်။ ရေးတုန်းက အပိုင်း(၅) ပိုင်း ခွဲရေးပါတယ်။ အခု (4)ပိုင်းကို တပေါင်းတည်း တင်ပါတယ်။ အားလုံးပျော်နိုင်ပါစေ။
ကြည်သာချမ်းမြေ့တဲ့ အတာသင်္ကြန်ရဲ့အတက်နေ့သို့ပင် ရောက်လာပေပြီ။ အသက်တွေသာ ကွာခြားလျှင် ကွာခြားမည် မြန်မာတို့၏ ရိုးရာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ချစ်မြတ်နိုးသည့်စိတ်၊ ခုံမင်နှစ်သက်သည့်စိတ် ကတော့ အားလုံး အတူတူပင်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်လည်း ရေခြားမြေခြား ဝေးကွာသောအခါ မြန်မာတို့ အလွမ်းဆုံးပွဲတော် ၊ အမျှော်လင့်ဆုံး ပွဲတော်ကား သင်္ကြန်ပွဲတော်ပင်ဖြစ်နေသည် မဟုတ်ပါလော။ ယခုလဲကြည့်လေ သင်္ကြန်မောင်၊ သင်္ကြန်မယ်၊ Blogerမောင်၊Blogerမယ် တို့ သင်္ကြန်(၄)ရက်လုံးလုံး သပြေခက်နှင့် ရေပက်သူကပက်၊ ရေမွှေးပုလင်းလေး တကိုင်ကိုင်နှင့် ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ရေမွှေးဖြန်းသူကဖြန်း၊ စတုဓီသာ အလှုလုပ် ကျွေးသူကကျွေး၊ သင်္ကြန်သီချင်းဆိုကာ ကသူက ကနှင့် မြန်မာအပေါင်း မင်္ဂလာ ခညောင်း နေကြသည် မဟုတ်ပါလော။
သို့သော်ငြားလည်း အော့ကြောလန်မောင်မျိုးနှင့် သရုပ်ပျက်အညတရတို့ အုပ်စုကား ရေခွက်တလုံးနှင့် ခွက်စောင်း ခုတ်သူကခုတ်၊ ချီးဖတ်(Chevas)ပုလင်း ခါးကြားထိုးပြီး မူးသူကမူး၊ မီးသတ်ပိုက်ကြီးတကိုင်ကိုင်နှင့် လာလည်သူ ဖော်သဟာ အပေါင်းအား သင်္ကြန်ရေပက်၍ အစွမ်းကုန်ဧည့်ခံနေ၏။ အလိုလေး အဲဒီလောက် သောင်းကျန်းချင်တိုင်း သောင်းကျန်းနေသည့် ကာလသားတို့၏ မဏ္ဍ ယခုအခါသမယ သင်္ကြန်အတက်နေ့တွင် မဒီကညာ အပျိုကြီး အပျိုလေး အပျိုပေါက်စကွေး ပေါင်းစုံနှင့် ဆူဆူညံညံ တိုးမပေါက်အောင် စည်ကားနေ၏။ အံ့သြကုန်နိုင်ဖွယ် ထူးဆန်းပေစွ။ အဘယ် အကြောင်းများ ကြောင့်နည်း။ ကြိတ်ကြိတ်တိုးသည့် အကြောင်းရင်းကို သိပါက ထူးသော်လည်းမဆန်းပေ။ အညတရမဏ္ဍ၏ လေးဖက်လေးတန်သော ထောင့်များတွင် နေရာယူထား သည့် ကြေငြာဆိုင်းဘုတ်ကြောင့်ပင် ဖြစ်၏။ အဘယ်သို့သော ကြေငြာဆိုင်းဘုတ်ပါလဲဟု အမေး မစောလိုက်ပါနှင့်။ ဖတ်ကြည့်တော်မူကြပါကုန်။
ို"ဟိုက်ရှားပါး "မြတ်စွာဘုရား၊ မောင်အညတရတယောက် သူ့ဦးလေး ဘယ်လိုနည်းဖြင့် ကြိုးစားကြိုးစား ရည်းစားမရတဲ့ လူပျိုသိုးကြီး ရှေ့တတောင်လောက်ထွက်နေသည့် ဘီယာဗိုက်ပိုင်ရှင်ကို သင်္ကြန်ခါတော်မှီ အစွန်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါလားကွယ်ရို့။အော်... ဒါကြောင့် အညတရတို့မဏ္ဍက ဘုမသိဘမသိ အပျိုကြီးများ၊ သိသိကြီးနှင့် ဒီဘ၀က လွတ်ပြီးရောဆိုသည့် အပျိုကြီးများ၊ အပျိုကြီးဖြစ်မှာကြောက်သည့် အပျိုမကြီးတကြီးများ ၊ဦးလေးကြီးအရွယ်ကိုမှ ရင်ခုန်သောအပျိုမလေးများ၊ မဲမနှိုက်သော်လည်း လာကြည့်သည့် စပ်စပ်စုစု အပျိုလေးများနှင့် ကြိတ်ကြိတ်တိုး ကြက်ပျံမကျ ကြက်သစ်ပင်ပေါ်တက်နေရအောင် စည်ကားနေခြင်းကိုး....။ အံ့သြကုန်နိုင်ဖွယ် ပါတကား။ ဦးလေးပြောင်၏ တူတော်မောင်အညတရပင် တအံ့တသြဖြစ်ရ၏။ ရွာကျန်အပျိုကြီးများ ဒီလောက်များလိမ့်မည်ဟု သူကြိုတင်သိမထား။ နောက်ဆုံးမည်သို့မှ ထိန်းမရဖြစ်လာသဖြင့် အရက်ပုလင်း ခါးကြားထိုးပြီး မဏ္ဍချောင် တနေရာတွင် မူးပြီးမှေးနေသော အနက်ရောင်အိမ်မက်ကြီးကိုနိူးပြီး အကူအညီတောင်းရ၏။ မူးသာမူးသည် ဒီနေရာမှာတော့ ဒီကောင်ကြီးက အားကိုးရလောက်၏။ အခုလဲကြည့်ပါအုံး။ ကွိကွိကွကွလုပ်ပြီး ဖုန်းတလုံးနှင့်ဘာတွေပြောလိုက်သည်မသိ။ တခဏအတွင်းမှာပင် မျှားပြာ၊ ညိမ်းညို၊ မောင်ကောင်းအောင်၊ မင်းကျန်စစ်၊ တင့်ထူးရွှေ၊ နတ်ရှင်နောင်၊ ကိုရင်ညိန်း ၊ တို့ ဦးဆောင်သည့် ဂေါ်မစွန်အုပ်စု ဂျင်းဘောင်းဘီဆင်တူဝတ်ပြီး အလျှိုလျှိုရောက်လာ၏။ ကိုမျှားပြာက "နှစ်သစ်မှာ အဆင်ပြေပါစေ ကိုအညတရရေ"ဟု ရေကစားမဏ္ဍပေါ်တက်ပြီးနှုတ်ဆက်၏။ မောင်အညတရကလည်း "အမျိုးသမီးတွေ ထိန်းမရသိမ်းမရ အရမ်းတိုးလို့ ဇောချွေးပြန်တာကလွဲရင် အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ"ဟုပြန်ဖြေရာ မျှားပြာက "ဒါတော့မပူနဲ့ ကျုပ်တို့တာဝန်ထား"ဟု အာမခံပြီးစင်အောက်ဆင်းသွား၏။ သူအာမခံ၍သာ "ကျေးဇူးပါဗျာ"ဟု ပြောလိုက်ရသည် အပျိုတွေကြောက်လောက်အောင် သူတို့ခါးကြားမှာ ဗျောက်လည်းမပါ၊ ရေပြွတ်သေနတ်လည်းမရှိ။ ရေမွှေးပုလင်းလေးတောင် အလှပြဆောင်မထားပေ။ ဒုတ်ခေါ သူတို့ဘယ်လို ထိန်းမည် မသိ။ ယနေ့တော့ မောင်အညတရတို့ အြံ့သစရာတွေချည်းဆက်တိုက်တွေ့နေရ၏။ ကိုမျှားပြာ တစုံတခု ပြောလိုက်ပြီးနောက် အမျိုးသမီးများတယောက်မှရှေ့တိုးမလာတော့ပေ။ စပ်စုသည့်အညတရ စင်ပေါ်မှာဆက်မနေနိူင်တော့ မျှားပြာ ဘာပြောလိုက်သည်ကို သိချင်ဇောဖြင့် စင်အောက်ဆင်းလိုက်လာ၏။
မဏ္ဍစင်ပေါ်အရောက် ကိုရင်မျိုးတယောက် အနားနားသို့ ပြေးလာရင်း "ဟေ့ကောင်အညတရ ဘယ်တွေလျှောက်သွားနေတာလဲ။ ဒီမှာ ပရိတ်သတ်တွေ စုံနေပြီ။ မိုးချုပ်လို့ မီးတွေတောင် ထွန်းထားပြီးပြီ။ ဖိတ်ထားတဲ့ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမင်း ဦးဆိုးသွမ်းတို့၊ Dr.ဦးစိုးထက်တို့ တောင်ရောက်နေပြီ။" "ဟင့် မင်းဥစ္စာ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမင်းလည်း ပြောသေးတယ် ဦးစိုးသွမ်းတဲ့။" စိတ်တိုဟန်ပေါက်နေသည့် မောင်မျိုးက " ဟေ့ကောင် အညတရ လျှာမရှည်နဲ့။ ကိုဆိုးသွမ်းက အိမ်တိုင်ချွတ်ပြီး ဘောလုံးပွဲ လောင်းတာကလွဲရင် ကျန်တာအကုန်ကောင်းတယ်။ ကိုစိုးထက်ကလည်း စာမကျက်၊အိမ်မကပ်ပဲ ထမင်းမေ့၊ဟင်းမေ့ Blog လည်တာပဲရှိတယ်။ မင်းလျှောက်မပြောနဲ့။ ငါနားရင်းအုပ်လိုက်လို့ သွား၃၂ချောင်းလုံး လေညှင်းခံထွက်ပြီး သွားချီး ယိုးဒယားကသွားမယ်။" "မင်းက ဟိုလူ့လဲ ဗလာမဲ၊ ဒီလူလဲဗလာမဲ ကျအောင် လုပ်ခိုင်းနေတော့ အခုပေါက်မယ့်သူဆိုလို့ လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေး ဗေဒါလေးပဲ ရှိတော့တယ်။" ထိုအခါ အညတရက အပြင်းအထန် အပြီးကန့်ကွက်လေ၏။ "မဗေဒါလဲ ဗလာမဲပေးပါ ကိုရင်မျိုးရယ်။ သူရဲ့ Blog မှာ တင်ထားတဲ့ လက်ရှိ စိတ်ကူး အခြေအနေက ကြောက်စရာကြီးကွ။ ဘာတဲ့ Man may come and Man may go ... But i go on forever... တဲ့ ။ မင်းဟာသူမင်းသာ စဉ်းစားကြည့်ပေတော့.... .... ဟီ.....ဟိ" "ဟင်မြတ်စွာဘုရား ဟတ်လား။ ဒါဆိုရင် သူလဲဗလာမဲပေါ့။ ကြည့်လဲလုပ်ပါကွာ။ အားလုံးဗလာမဲတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာလဲဟ။ အညတရရာ ခဲထုခံရအောင်တော့ အလုပ်ပါနဲ့ကွာ။ " "ဖြစ်ပါတယ် ကိုရင်မျိုးရယ် ဒီလိုလုပ်ရအောင်။" ဟုဆိုကာ အညတရတယောက် မောင်မျိုးအနီးသို့သွားပြီး ဘာတွေပြောသည်မသိ။ မောင်မျိုးတယောက် ပြုံးတုန်း ပြုံးတုန်းနှင့် နားထောင်နေ၏။ပြီးနောက် "အညတရရေ ဒီလိုဆိုလဲ ဘုရား၊တရားတပြီး အဲဒီ အစီအစဉ်အတိုင်း လုပ်ကြတာပေါ့ကွာ။ အဲဒီလိုဆို မင်းစင်နောက်သွားတော့" ဆို၏။
xxxx အပျိုကြီးတို့ရေ...... နောင်နှစ်ခါလည်း ဆီးလို့ကြိုကွယ် xxx လေးပြောင်ပြန်လာမယ် xxx လာပါမယ် xxx ဒီနှစ်လိုပဲ ဆီးလို့ကြိုကွယ် xxx လေးပြောင်ပြန်လာမယ် xxx
Posted by Heartmuseum at 12:48 PM
I missed that moment sooooo much as i enjoy and appreciate to reading it.
You made me smile and laughs. Thanks ever so much for bring back the greatest memories for all!!!
The best awesome ThinGyan memories post ever in Myanmar Blogosphere.
ခုမှ ဖတ်ဖူးတာ.. ကောင်းတယ်....။
ရယ်ရတယ်ဗျိုး.... ဇာတ်ကောင်တွေက ဘယ်သူတွေမှန်းမသိပေမဲ့ ရယ်ရတယ်.... ကျေးဇူး
အဟောင်းဆိုပေမယ့် ခုမှရေးတဲ့ အသစ်အတိုင်းပဲ
ဒါနဲ့ ဒီနှစ် သင်္ကြန်ကော ဘာအစီအစဉ်ရှိလဲဗျ
ကျုပ်ကတော့ ပြတိုက်ထဲ ယိမ်းတိုက်မလို့
Shakira လိုကတတ်တဲ့ Blogger မမတွေလိုက်
ဘူလေးတွေက အပျိုကြီးလေးတွေလို ချစ်ဖို့ကောင်းစွာ သင်္ကြန်ကို ကျော်လွန်ကြတယ်
ဟဲ..ဟဲ... အရေးကတော့ လန်းတယ်..
ခုမှ ဖတ်ဖူးတာ ကိုဟတ်ကြီးရေ...
ပြန်လည်ဆန်းသစ်ပေးမှု အတွက် ဂယ်ရီး
ပြတိုက်ကြီး ပို့စ် က ဒီနေ့ ကျနော် ဖတ်တဲ့ ပို့စ်တွေထဲမှာ အရှည်ဆုံးပါပဲ ၊၊ ပျော်စရာလည်းကောင်းပါတယ်၊၊
ကိုအညတရကတော့ လုပ်ပြီ။ အသစ်ရေးမလားလို့ ပြောကြည့်တာ (၂)နှစ်ဆက်တိုက် အထိနာသွားတယ်း)) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်ကို ပျော်စရာပို့စ်လေး တစ်ပုဒ်ပါ။ ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး မနှစ်က သင်္ကြန်အချိန်ကိုလည်း လွမ်းနေမိတယ်။ အရာရာဟာ အချိန်နဲ့ အမျှ ပြောင်းလဲနေတာပဲနော်။ မေ့ကိုလည်း သတိရတယ် ကိုအညတရရေ... ပြန်တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရယ်လည်းရယ်ရ လွမ်းလည်းလွမ်းရတဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ပါ...
အဟောင်းလို့ဆိုပေမဲ့ ပထမဆုံးဖတ်ဘူးသူ တယောက်တယောက်အတွက်တော့ အသစ်ပေါ့ ဖတ်ရင်းနဲ့ အမြင်ထဲပေါ်လာစေတဲ့ ရသလေးပေးလို့ ကျေးဇူး။
အော်.. သူများကို ရေသန့်ဗူးဖုံးပဲကိုက်ခိုင်းလိုက်သေးတယ်.. ဟွန့်.. စပါးခင်းမှာ ပထမဆုံး စပါးနှံက ကြီးတယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး.. လူ့စိတ်ကိုပြောတာပါ.. ပြီးတော့ အဲဒိပိုစ့် မူရင်းက ကိုပီကေဆီက ကူးထားတာ.. ဟဲ.. ဟဲ.. (သူကတော့ဘယ်က ပြန်ဖော်ပြလဲမသိ).. ဒါနဲ့နေအုံး.. မဗေဒါကို မဲပေါက်အောင်တော့လုပ်ပေးအုံးနော်..၁နှစ်ကျော်ပြီ.. အသဲနုလေး ပြန်လည်မွေးဖွားသင့်ပြီ.. ဟီး..
ဒီနှစ်အတွက်လဲ လုပ်အုံးလေ... ပျော်စရာနေ့တွေ လွမ်းတယ်ဗျာ... ငါလဲ အလုပ်များလို့ မတင်ဖြစ်သေးဘူး။
ဟတ်ကြီးလဲ အလုပ်တွေ မပြီးသေးဘူးထင်ပါတယ်။။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ....